Ma jiri karaa duufaanno Isbaanish ah? | Saadaasha Shabakadda
Haddii aad jeceshahay dhacdooyinkan saadaasha hawada, hubaal waxaad dooneysaa inaad ogaato haddii ay jirto wax suurtagal ah oo taas ah qaar F5 ah ayaa la sameeyaa hareeraha qaybahaas, sax? Way fiicnaan laheyd inaad aragto qaar, inta ay ka samaysantay meelo aan cidina khatar ku jirin.
Ma jiri karaa duufaanno Isbaanish ah? Haa dabcan, laakiin midkoodna lama barbar dhigo kuwa lagu arki karo Mareykanka.
Mareykanka, gaar ahaan magaalada Oklahoma, waxaa lagu yaqaan dhacdooyinka cimilada daran ee ka dhaca halkaas, oo ay ku jiraan duufaannada. Sannad kasta dhowr ayaa la sameeyaa kuwaas oo uga taga ugaarsadayaasha iyagoo yaaban. Iyagu waa ifafaalo aad u qurux badan, laakiin sidoo kale waxyeello weyn u geysan kara, aad iyo aad u badan oo haddii aad fursad u hesho inaad tagto meelahaas, marnaba uma baahnid inaad ka dhowaato 2km.
Isbaanishka duufaantu ma dhaafto heerka F1. Waxay geystaan ​​xoogaa waxyeelo hantiyeed, laakiin ma jiraan wax halis ah. Si kastaba ha noqotee, suurtagalnimada inay sameyso mid aad u xoogan sida kuwa Waqooyiga Ameerika aad ayey u hooseysaa, laakiin waa dhab, sida uu sheegayo Jerónimo Lorente, oo ah borofisar cilmiga saadaasha hawada ee Jaamacadda Barcelona.
Sawir - Ericksson
Dhulkeenna, si kastaba ha noqotee, waxaa jira kuwo soo noqnoqda biyo mareenada. Waxay badanaa ka sameysmaan badda Mediterranean, hoosta salka daruuraha cumuliform, gaar ahaan dhammaadka xagaaga. Waxay leeyihiin astaamo badan oo ay wadaagaan duufaannada, laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ku kala duwan yihiin waxay tahay in biya-mareennada ay ku sii jiraan badda, iyo xawaaraha dabaysha ayaa aad uga hooseeya (inta udhaxeysa 110 iyo 130km / saacaddii).
Sidaas oo ay tahay, juquraafiga Isbaanishka waxa kale oo lagu arkay duufaanno waxyeello geysta, sida tii ka dhacday bishii Maarso 1671 ee Cádiz. Waxaa lagu qiyaasaa inuu lahaa cabirka F4. Waa run inay waqti dheer qaadatay, laakiin taasi micnaheedu maahan inaysan dib dambe u dhici karin.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko sameynta F5 tornado, sidee adiga kugu saabsan? Ugu yaraan hadda, waa inaan u degno F1, iyo sidoo kale biyo-xidheenno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Ma jiri karaa duufaanno Isbaanish ah?